N95 Mask Vagadziri uye Vanotengesa - China Fekitori - Quanzhou waimaoniu Export uye Export Trade Co, Ltd.
Musha > Zvigadzirwa > Masks > Chokuvharisa kumeso chinonzi n95
N95 masiki ekunze zita: N95 kumeso-mask
N95 Mask Certification Muviri: NIOSH
N95 masiki chikamu: inodzivirira mask
N95 masasi kuiswa: Mukombe N95 masiki, kupeta N95 masiki
N95 maski basa: iyo filtration inobudirira yeasinga ane aneerodynamic dhayamita ye0775µm ± 0.020µm inosvika zvinopfuura 95%
Iyo N95 maski ine kusefa kwakanaka kweanopfuura 95% yezvikamu zvine aerodynamic diamita ye04075µm ± 0.02µm. Iyo aerodynamic dhayamita yemabhakitiriya emweya uye fungal spores inonyanya kusiyana pakati pe07- 10µm, uye zvakare iri mukati mekudzivirira kweN95 masks. Naizvozvo, masiki N95 anokwanisa kushandiswa kuchengetedza mweya. Izvo zvakakodzerawo mvura kana isina-oiri isina kugadzirwa inokonzerwa nekupfapfaidza. Njodzi inodenha gasi zvimedu. Inogona kunyatsogona kusefa nekuchenesa mweya yekunetsvina (kunze kwemweya une muchetura), kubatsira kudzikisa huwandu hwezvimwe zvisinga tsanangurike hutachiona (senge furu, anthrax, TB, nezvimwewo), asi haigone kubvisa chirwere chekusangana, kurwara kana kufa njodzi.
Dhipatimendi reVashandi veUS rakakurudzira kuti vashandi vekurapa vashandise maski N95 kudzivirira hutachiona hwehutachiona hwemhepo sengefurufuru uye chirwere chepfu.
NIOSH yakatsiviwa mamwe ma Anti-elementate mask mazinga zvakare inosanganisira: N95, N99, N100, R95, R99, R100, P95, P99, P100, iyo inokwana mhando gumi nembiri. Aya mazinga ekudzivirira anokwanisa kuvhara chikamu chekudzivirira cheN95.
"N" zvinoreva kusapindirana neoiri, yakakodzera sosi isina mafuta.
"R" zvinoreva kuramba mumafuta, yakakodzera maoyiri kana kuti isiri-oiri svutugadzike. Kana ichishandiswa mukudzivirirwa kwemafuta masini, nguva yekushandisa haifanirwe kupfuura maawa masere.
"P" zvinoreva mafuta chiratidzo, chakakodzera kune oiri kana husina-oiri zvimedu. Kana ichishandiswa emafuta zvimedu, iyo nguva yekushandisa inofanirwa kutevera zvinokurudzirwa nemugadziri.
"95", "99" uye "zana" zvinoreva huwandu hwekunyungudika kwemhanza kana uchiedzwa ne3,3 micron particles. "95" zvinoreva kuti kusefa kwefetera iri pamusoro pe95%, "99" zvinoreva kuti kusefa kwefetera iri pamusoro pe 99%, uye "zana" zvinoreva kuti kuchenesa kwakanaka kuri pamusoro pe99.7%.
Pamusoro pekushongedza kugona kweiyo N95 maski, kuvhara kwemaski kumeso ndicho chimwe chezvinhu zvakakosha kusarudza kukosha kwe mask. Mhando dzakasiyana dzemaski dzine misiyano mikuru mukukodzera kwavo kumeso kwemunhu. Naizvozvo, usati washandisa mask, kukosha kwemaski kunofanira kutanga kwakatariswa. Munguva yekuomeswa kwechiso cheuyo akapfeka, ita shuwa kuti mweya unokwanisa kupfuura nekubuda mukati memaski kana iri padhuze nepamuromo pechiso.
Hot Tags: N95 Mask, Vagadziri, Vagadziri, Huru, Fekitori, Tenga, China, Yakagadzirwa muChina, Mutengo, Mutengo Wengo, Quotation, CE, FDA
Chokuvharisa kumeso chinonzi n95NIOSH maskN95 Medical MaskN95 inodzivirira maskN95 chirwere chechisimbaN95 antivirus maskN95 kumeso maskNIOSH kumeso maskN95 3D masiki